Mampiasa WordTracker hananganana ny valin'ny fanontanianao sy ny valiny | Martech Zone
Talata, Martsa 1, 2016 Douglas Karr
Izahay dia mandoa fitaovana be dia be handinihana ireo mpanjifantsika ary mbola handinika bebe kokoa aza izahay. Isaky ny manomboka paikady famakafakana teny lakile feno dia ilaina foana ny fitaovana iray. Matetika aho tsy mikasika izany mandritra ny volana maro… ary matetika avelako hilatsaka ny famandrihana… fa avy eo…
WordTracker ilaina izany satria tsy mahita fitaovana iray hafa izay manana fanontaniana marobe isan-karazany tadiavin'ny mpampiasa karoka manodidina ny lohahevitra tsirairay. Efa niresaka izahay fananganana tranomboky feno ho an'ny marikao - ary fototry ny fahombiazan'io trano famakiam-boky io dia ny famaliana ireo fanontaniana apetrak'ireo mpampiasa motera fikarohana. Ary, rehefa mandeha ny fotoana, dia mihamaro ny mpampiasa mampiasa ny fangatahany. Ity dia mineraly volamena ho an'ireo mpivarotra atiny rehetra mitady hamita ny tranombokiny.
Ao anatin'ny bara manga an'ny WordTracker dia sivana azonao ampiasaina hampiasaina sy hanilihana ireo teny, hametraka ny halavan'ny motera fikarohana, na - indrindra indrindra - sivana ho azy fotsiny fanontaniana fanalahidy. Ampiharo fotsiny ny sivana fanontaniana momba ny teny lakile, ary atolotra anao ny laharam-pahamehana amin'ireo fanontaniana malaza indrindra izay notadiavina tamin'ny volana lasa.
Boom! Tsy sarobidy fotsiny io noho ny zavatra notadiavin'ny olona teo amin'ny tantara, fa afaka manome modely ho anao isaky ny vokatra na serivisy mety amidin'ny mpanjifa. Ohatra, miara-miasa amina mpanjifa e-commerce izahay izao izay manana vokatra fanafody maherin'ny 10,000 ao amin'ny katalaoginy. Amin'ny famakiana ny firafitry ny fanontaniana dia afaka mahita ny atiny tsy maintsy omenay isaky ny pejin'ny vokatra na lahatsoratra mijoro irery izahay mba ho feno:
famaritana - Inona ny [anaran'ny vokatra]?
Fangaro - Inona no ao amin'ny [anaran'ny vokatra]?
levitra - Ohatrinona ny [anaran'ny vokatra] ilaina hanamaivanana ny [soritr'aretina]?
fampiharana - Manala [soritr'aretina] ve ny [anaran'ny vokatra]
Famantarana - Ahoana no fanamaivanana [soritr'aretina]?
Azontsika atao ny mandray an'io valiny io ary mampihatra izany amin'ny vokatra tsirairay amidiny mba hahazoana antoka fa manana tranomboky atiny feno izy ireo.
Tags: fanontaniana fanalahidyfikarohana siantifikaolanawordtracker
Big Data dia manosika ny marketing ho amin'ny fotoana tena izy